Ngidala kanjani i-wardrobe yezingane zami?
Amathiphu wekhabethe elihlelekile
Faka izingane lapho zihlanza
Ukugcina i-oda kule ikhabethe yezingane kuyinselele. Izingubo zincane, kodwa kukhona okuningi. Ngoba izingane zikhula ngokushesha bese zidinga izinto ezintsha. Ngaphezu kwalokho, izingane kufanele zifunde ukuthi kungani ukuhlanza njalo kubalulekile futhi kunengqondo. Kodwa ngendlela efanele kanye nosizo lwabancane, ungaphatha ukugcina i-closet kahle.
Muck kule ikhabethe
Ngaphambi kokuba uqale ukudala i-oda, kufanele uqale ungene ngaphakathi kwekhabethe.
Hlanza ikhabethe emakhazeni
Noma yini engasadingeki noma engasayithandi iyayilahlwa. Kunezindlela eziningana lapho iKhabhinethi ingalungiswa kahle futhi ihlanzwe.
Isibonelo, ngendlela ye-crane ye-3, uhlela zonke izingubo eziqukathweni ezibhalwe ngokuthi "Gcina," "Ewusizo," futhi "Phonsa." Ungabe usunquma ukuthi ufuna ukuthengisa, ukupha, ukulahla noma ukunikeza izingubo ezihlelwe kuqoqo elidala lezembatho.
Nakuba le nqubo idala ukukhathazeka okuningi ekuqaleni, yenza kube lula ukuhlela kabusha ngokuphelele okuqukethwe kwekhabethe. Ungasebenzisa futhi isikhathi sokusula ikhabhobho elingenalutho.
Isu eliphumelelayo lokugwema ukushaywa indiva akumele livumele ukuthi kwenzeke. Yiqiniso lokhu kunzima nezingane. Yingakho okuqukethwe kwekhabethe kufanele kuklanyelwe ukuba kube nobungane nabantwana, ngakho konke kunendawo yayo evamile:
Hlunga izingubo ngamabhulukwe ahlukahlukene kanye nesitolo kwelinye iphaketheni, T-shirts kwelinye.
Isibonelo, sebenzisa amabhokisi ahlukene ukugcina izicathulo, ama-pajamas, ama-scarves noma ama-suit suits. Ukwenza kube lula ngawe nezingane, ungabhala.
Izinto zasebusika ezingadingeki ehlobo futhi ngokuphambene nazo zingagcinwa emabhokisini avaliwe noma ekhabhinini. Ngakho-ke futhi zivikelwe ngokubhebhetheka kwenundu.
Ngezingubo eziye zagqokwa kepha akudingeki zigezwe, ungakha isikhala esithile. Isibonelo, ngesimo sesitulo, isitimela sezembatho noma izingwegwe eziningi ezinhlangothini noma odongeni lwekhabhinethi. Izambatho zingabuye ziphinde ziguqulwe ngosuku olulandelayo noma zibuyiselwe ekhabetheni.
Futhi kunconywa ibhasikidi yokuhlanza e-nursery. Izingxenye ezingcolile azikho ezungezile.
Izingane ezincane ikakhulukazi kufanele zifunde ukuthi ukugcina i-oda kusebenza kanjani. Njengomzali, ungakwazi ukusekela inzalo yakho. Abazali bahlala beyisibonelo, ngisho nalapho behlaziya. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi izingane ziphile ngendlela ethile eyisisekelo. Umphumela kanye nemilayezo ecacile namanje ibaluleke kakhulu ngisho nasesikoleni, ukuze izingane zikwazi kahle ukuthi zenzeni.
Ukuze amahlumela agcine i-oda ekamelweni lawo ngokuhamba kwesikhathi, kumele akwazi ukufinyelela okuqukethwe. Izembatho ezidingekayo nsuku zonke, akufanele zibe esiteji esiphezulu. Ngama-hangers ngobukhulu bomntwana, abantwana bangakwazi ukusingatha kangcono. Kulula ngabo ukuthi baxhume izingubo kanye namabhakethi ngokwabo. Kukhona nezinhlelo zekhabhinethi ezenzelwe izingane kanye nosayizi wazo.
Uma ngabe i-oda elithile likhona, kulula ukuba izingane zilondoloze. Ngoba bangakwazi ukuzimisela ohlelweni olusungulwe kuKhabhinethi. Ukugcina izinto ezihlelekile kuyinkqubo eqhubekayo. Izingane zikhula futhi zithuthuke ngokushesha, ngakho izingubo ezintsha ziyadingeka ngezikhathi ezincane.
Ngakho-ke kunconywa ukuthi kube nemithetho yokulungisa, isibonelo ngosuku olusimisiwe lapho ikhabethe ihlanzwa khona. Ngaphandle kwalokho, njenge 5-S indlela iphakamisa ukuhlehlisa izithombe zezwe elihle ngemuva kokukhipha, ukuhlunga nokuhlanza ikhamera. Izingane zingaziqondisa ngalokhu, uma zizihlambulula.
Indima kogogo nomkhulu ... Imfundo yomndeni
Hamba izingane, igumbi lihlanzekile! | imfundo
Abantwana abanesipho esiphakeme | imfundo
Lapho izingane ziphula izinto | imfundo